Cali Xarbi, Xildhibaanka aan dilay ee David Amess, waxa uu dhibaato ku ahaa Muslimiinta | Onkod Radio
Cali Xarbi, Xildhibaanka aan dilay ee David Amess, waxa uu dhibaato ku ahaa Muslimiinta
Muqdisho (Onkod Radio) – Nin asal ahaan Soomaali ah, oo loo haysto dilka xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka UK, Sir David Amess, ayaa ka hadlay waxa ku dhaliyay falkaas.
Cali Xarbi Cali, oo 26 jir ah, ayaa sheegay inuu u dilay xildhibaanka sababo la xiriira inuu u codeeyay duqeynta Suuriya.
Sir David Amess, oo laga soo doortay deegaanka Southend West, ayaa toori lagu dilay 15-kii October 2021.
Waxa uu aad u doonayay inuu ku biiro ururka isku magacaabay dowladda Islaamka, oo uu rabay inuu Suuriya u safro mudadii u dhexaysay 2015 iyo 2017, balse ay taa ku adkaatay.
Waa xildhibaankii labaad ee isagoo baarlamaanka ka tirsan la dilo shantii sano ee lasoo dhaafay gudahood. Sannadkii 2016-kii ayaa la dilay Jo Cpx oo ahayd xildhibaanad ka tirsan xisbiga shaqaalaha.
Xuquuqda Daabacaadda BBC Somali